Geela, oo ah hab aad u hufan oo wax lagu raaco | Safarka Absolut
Daniel | 29/06/2021 11:16 | La cusbooneysiiyay 29/06/2021 12:17 | Masar
Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, laga yaabee ilaa 3.000 oo sano kahor, bini aadamku inuu istcimaalo geela oo ah hab wax ku ool ah oo gaadiid ah oo ka socda gobollada qaarkood ee adduunka.
Xayawaanadan qoob-ka-ciyaarka ah ayaa caan ku ah keydka dufanka (buro) oo ka soo baxa dhabarkiisa, waxaa guriyeeyay nin kumanaan sano ka hor. Waxay ahaan jireen, walina yihiin, isha cuntada (caano iyo hilib), halka maqaarkooda dhaqan ahaan looga isticmaali jiray dharka. Laakiin waxaas oo dhan ka sarreeya, adeegsiga ugu muhiimsan waa habka gaadiidka. Mahadsanidin jirkooda gaarka ah, oo si gaar ah loogu habeeyay degaanada lamadegaanka.
1 Immisa nooc oo geel ah ayaa jira?
2 "Markabkii lamadegaanka"
3 Geela oo ah hub dagaal
Immisa nooc oo geel ah ayaa jira?
Si kastaba ha noqotee, waa in la ogaadaa in geelleyda adduunka oo dhami isku mid ahayn, ama aan loo isticmaalin sidii gaadiid ahaan. Waxay ka jiraan adduunka saddex nooc geela:
Geela bakteeriyada ah (Camelus bakteeriyada), oo ku nool Bartamaha Aasiya. Ka weyn kana culus noocyada kale. Waxay leedahay buro labalaab ah maqaarkuna waa dhogor.
Geela duurjoogta duurjoogta ah (Camelus ferus), sidoo kale leh laba buush. Waxay ku nooshahay xorriyadda bannaanka lamadegaanka ee Mongolia iyo meelaha cayiman ee gudaha Shiinaha.
Geela carbeed o Dromedary (Camelus dromedarius), noocyada ugu caansan uguna tirada badan, oo lagu qiyaaso tirada dadka ku nool adduunka oo dhan 12 milyan. Waxay leedahay hal-buur. Waxaa laga helaa guud ahaan gobolka Saxaraha iyo Bariga Dhexe. Waxaa sidoo kale markii dambe lagu soo bandhigay Australia.
Geela wuxuu gaari karaa xawaare gaaraya 40 kiilomitir saacadii iyo awood u leh inuu adkeysto waqti dheer isagoon liqin hal dhibic oo biyo ah. Jiifka tusaale ahaan wuxuu si fudud ugu noolaan karaa cabitaan 10kii maalmoodba mar. Caabbinta kuleylka waa mid cajiib ah: waxay ku noolaan kartaa saxaraha ugu kulul xitaa ka dib markay lumiso ilaa 30% cufnaanta jirkeeda.
Geela bakteeriyada cabaya
Sidee bay xayawaankani ugu maareeyaan inay ku noolaadaan biyo aad u yar? Sirtu waxay ku jirtaa dufan oo ku urura buulkooda. Marka jirku awrku u baahdo fuuq-bax, unugyada dufanka leh ee keydkan ku jira ayaa la shiidaa, iyagoo sii daaya biyaha. Dhinaca kale, kilyahaaga iyo mindhicirradaadu waxay leeyihiin awood weyn oo dib loogu cusbooneysiinayo dareerayaasha.
Laakiin taa macnaheedu maaha in awrku noolaan karo biyo la’aan. Markay tahay waqtiga la cabayo, geel dhan 600 oo kg wuxuu cabi karaa ilaa 200 litir seddex daqiiqo gudahood.
Caabbintaan weyn ee harraadka iyo kuleylka, oo aan macquul aheyn in laga helo xayawaannada badankood, ayaa caleemo saartay xayawaankan sida ninka saaxiibka ugu dhow inuu ku badbaado cidlada.
Qarniyaal, gawaarida Ganacsatadu waxay geela u isticmaali jireen inay ka gudbaan dhul ballaaran oo lama degaan ah. Waad ku mahadsan tahay isaga, waxay ahayd suurtagal in la sameeyo wadooyin iyo xiriir ganacsi iyo dhaqan oo aan suurtagal ahayn haddii kale. Dareenkan, waa in la ogaadaa in geelu uu ahaa qodob aasaasi u ah horumarka bulshooyin badan oo bina aadam ah oo ku nool Aasiya iyo Waqooyiga Afrika.
Haddii lamadegaanka uu ahaa badweyn ciid ah, geelu wuxuu ahaa wadada keliya ee lagu dhex maro iyo dammaanadda in la gaaro deked aamin ah. Sababtaas awgeed ayaa caan loogu yaqaan "Markabkii lamadegaanka".
Gawaarida Geela ee lamadegaanka gudbaya
Xitaa maanta, marka gawaarida dhulka oo dhan iyo GPS-ka ay ku guuleystaan ​​bedelkiisa gaadiid ahaan, geela wali waxaa isticmaala qabiilooyin badan oo reer baadiya ah. Si kastaba ha noqotee, waa wax caadi ah in lagu arko isaga waddamo gaar ah doorkiisa cusub sida soojiidashada dalxiiska Baabuur ahaan
Waa wax iska caadi ah, safarada ay ku tagayaan meelaha ay aadayaan sida Marooko, Tuniisiya, Masar ama Isutagga Imaaraatka Carabta, inay dalxiisayaashu kireystaan dalxiisyada geela ee lamadegaanka dhexdiisa. Iyaga oo leh (had iyo jeer gacmaha hageyaal khibrad leh), safrayaasha raadinaya shucuurta waxay soo galaan dhulal madhan oo aan loo dulqaadan karin, iyagoo hadhow seexda teendhooyin hoostooda cirka xiddigta leh ee lamadegaanka. Geelu waa, ka dib, astaan ​​u ah waqti dheer oo la ilaaway oo safarro jacayl ah iyo riyooyin qarsoodi ah.
Geela oo ah hub dagaal
Marka lagu daro waxtarkiisa la xaqiijiyay oo ah gaadiid ahaan, geela sidoo kale waxaa la isticmaali jiray taariikhda oo dhan hubka dagaalka. Horeba Qadiimiga ah Beershiyaanka Achaemenid Waxay heleen tayada xayawaankan oo waxtar badan u leh dagaalkooda: awoodiisa inuu cabsi galiyo fardaha.
Sidaa darteed, kaqeybgalka halyeeyada dagaallamaya geel dagaallo badan ayaa noqday wax caadi ah, daawo kahortag ah oo lagu baabiin karo fardooleyda cadowga. Dukumiintiyo badan oo qadiim ah ayaa cadeynaya doorka geelu ku leeyahay qabsashadii boqortooyadii Lydia qarnigii XNUMXaad ee dhalashadii Ciise ka hor.
Geel iyo geel jire ayaa ka mid ahaa ciidammadii ka soo dagaalamay Waqooyiga Afrika iyo Bariga Dhexe laga soo bilaabo waqtiyadii Romanka iyo ilaa waqtiyadii ugu dambeeyay. Xitaa ciidanka Mareykanka wuxuu abuuray qarnigii XNUMX-aad unug gaar ah oo geel ah oo uu geeyay gobolka Kalifoorniya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Geela, oo ah hab gaadiid aad u hufan
in haddii taasi ay tahay mid kale waveaaaaaaaaaa
Ku jawaab sebas coral
Ku jawaab sebasola
sebas ayaa yidhi dijo
Ku jawaab sebas ayaa yidhi